90 rocker '' အားဖြင့် 50 မရှိမဖြစ်တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်
ဂီတ 90 Hits
by အမျိုးသမီး Melissa Bobbitt
တ loneliest အရေအတွက်ကဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်တော်မယ့်တီးဝိုင်းတစ်အချို့သောအမျိုးအစားဖြစ်ခြင်း၏မျှော်လင့်ချက်များကနေအနုပညာရှင်တစ်ဦးလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးနီးပါးအကျော်ကြားဆုံး '' 90 rocker များထဲမှတစ်ကြိမ်မှာတစ်ဦးတည်းကကျော်သွားကြပြီ - ခရစ်ကော်နဲလ်, Scott Weiland, Courtney မေတ္တာတော်, Thurston Moore က - ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအခြေခံလိုအပ်ချက်များတစ်-နားထောင်ရကြမည်စာရင်းပြုစုပါတယ်။ သင်သိတချို့ကနှင့်ချစ်ခြင်း။ အချို့ကိုသူ Mike Patton ရဲ့အီတလီစံချိန်စံညွှန်းများစုဆောင်းခြင်းများကဲ့သို့, သင်အသစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်အားလုံးတစ်ဦးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာကိုနားထောငျရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။
ဟီရိုယူကီ Ito က / Getty Images
သူမကကနေဒါကနေလာတာပါသော်လည်းယခင် Hole နှင့် Smashing ဖရုံသီး bass သမားအမျိုးသမီး Melissa Auf der Maur တစ် Nordic ဝိညာဉျသရှိပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော်ပိုင်နက်သို့သူမ၏ကနဦး foray ကျဲကျဲနှင့်မျက်စိကွယ်လုနီးပါး-သတ္တုနှင့်သူမ၏သီချင်းဆိုနေတဲ့ Valkyrie ၏တူခဲ့ပါတယ်။ Vox နှင့်တူတူရိယာတစ်ခုလွှမ်းမိုးလွှတ်အထူးသဖြင့် "လှိုင်းတံပိုးကျ" ။ လျှို့ဝှက်လမ်းကြောင်းတွင်သူမက en français "သင်မြည်းစမ်း" ဟုတိုးညှင်းသော်လည်းလေးနက်စွာသီဆို, ယမ်ကနေပြင်သစ်မှတောင်ဘက်စွန့်။
၏ grandiosity နှင့်အတူ အဆိုပါ Smashing ရွှေဖရုံသီး နှင့်သူ့ကိုနောက်ကွယ်မှ Zwan ၏လင်းလင်းရည်ညွှန်းသည်ချိုသောမျိုးကွဲ, Billy Corgan သည်သူ၏တစ်ကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက်မှာမိမိအီလက်ထရောနစ်ခြမ်းနှုတ်ဆက်ပြီး။ အဆိုပါပိုလ်အသံသည်သို့ကိုအသာပုတ်ရန်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူသူကဲ့သို့အ groovers ရေးသား "Walking အရိပ်။ " သူကလည်းတစ်မှောင်မိုက်ဖုံးပေါ်တွင်ရောဂါကုထုံးရဲ့ရောဘတ်စမစ်နှင့်အတူ dueting အားဖြင့်သူ့ကြီးမားကျယ်ပြ Rolodex သို့ပုတ် အဆိုပါပျား Geese '' 'တစ်စုံတစ်ယောက်သည် Love ရန်။ "
Bjork - "Post ကို"
"ငါ့ကို၏ကြည်းတပ် on" ဒါကအဖွင့်ဆူညံသံတစ်အာကာသယာဉ်ဆင်းသက်တူသောအသံ။ ဒါဟာများအတွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုသတ်မှတ် ယခင် Sugarcubes အဆိုတော်ရဲ့ ဒုတိယတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်။ အဆိုပါ Sprite အဖိုးတန်သလိုပဲကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီ beats-မောင်းနှင်စုဆောင်းခြင်းအခေါက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လှည်များနှင့် Nelly Hooper ခရီးစဉ်-hop ဒဏ္ဍာရီကထုတ်လုပ်, Post ကို Bjork ရဲ့ timeless ပြသခဲ့သည်။ သူမသည် "ဒါဟာအိုးဒီတော့တိတ်ဆိတ်မှုရဲ့" ဟုအဆိုပါ childlike စံအပေါ် ယူ. စက်မှုနှင့်ထိပ်တန်း 40 ဘုံ ( "ငါသင်မပျက်မကွက်") ကိုခွလျက်တည်ရှိပြီး။ Chilling-ယိမျးယိုငျနဲ့ ravers ရောနှောဒီ 1995 အယ်လ်ဘမ်မှအများကြီးအကြွေး။
ခရေးစ်၏ Matthews က - "Cockahoop"
တစ်ဦးတည်း-of-a-ကြင်နာအသံနှင့်မင်္ဂလာရှိ၏, ယခင် Catatonia crooner ကွာ bubblegum ကနေစှနှင့်ရိုးရာကျေးလက်တေးဂီတနှင့် Cockahoop ပေါ်တွင်ဘလူးဆီသို့သွားလေ၏။ အဆိုပါအမျိုးစုံရရောနှောအနုပညာရှင်ကတော့အပျော်အပျက်သေးယူခြင်းတည်းဟူသော (သူမ၏ဇာတိဝလေလျှာကို (ဧဝံဂေလိတရားကို "Arglwydd Dyma Fi ကို") အတွက်သီဆို Native Americans တွေ၏ဘေး (အငိုခငျြး "အလေးခြိတစျဖနျ") ကျော်မြည်တမ်းကာမျက်နှာနှင့်အတူသူမ၏ဒေါက်ထကန်ကိုမြင်လျှင် "Chardonnay") ။
ခရစ်ကော်နဲလ် - "Euphoria ပီတိနံနက်ပိုင်း"
Fontana / A & M က
Soundgarden ရဲ့င့်ဂီတကြွက်သားများနှင့် Audioslave ရဲ့ rifftorium အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူး, ကော်နဲလ်ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်အမျိုးအစားများမှတဆင့် darted ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူခေတ်ပြိုင်ပိုင်နက်သို့ snaked နှင့်ဂရမ်မီအမည်စာရင်းတင်သွင်းရရှိခဲ့ပါတယ် "ငါ့ကိုကိုပြောင်းလို့မရပါ" ။ သို့သော် "Flutter မိန်းကလေး" ဆန်းကြယ်မှုများအသံသော်လည်း, ထိုစဉ်ကပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ် Superunknown ခေတ်။ အဆိုပါသီချင်းရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ကူညီရေးအဖွဲ့ကစားသမား Alain ဂျိုဟန် (ထိုကျောက်ခေတ်၏ Queens) ။
Corin Tucker Band - "ငါ့ချယ်လ်ဆီးအသင်း Kill"
ဒီအဓိကရုဏ်း-အမျိုးသမီးမြေအောက်ကိုဆင်းအခြေချစေရန်မိခင်မျှော်လင့်မည်သူမဆိုအပြင်းအထန်မှားခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏ဒုတိယပြီးဆုံးပြီးနောက်အကဲဖြတ် Sleater-Kinney outing တစ် psyche-ရော့ခ်အံ့သြသည်။ သူမ၏တဦးတည်း-of-a-ကြင်နာ caterwaul ဟာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို-ကူညီ eponymous လမ်းကြောင်းအပေါ်အလိမ္မာ၌တည်, သူများအတွက်သီချင်းစာသားထဲမှာလိုလားတဲ့အမျိုးသမီးရာထူးကပ်လျက် "Neskowin ။ " အရာသူမ၏အတိတ်အကျင့်ကိုကျင့်ထက် dancier ရကြဘူး, တစ်ဦး mama ရှိကြောင်းအလေးပေး သူမ၏ခြေချောင်းအပေါ်နေဖို့တယ်။
Courtney မတ်ေတာသညျ - "အမေရိက၏ရည်းစား
Cheeky နှင့် Sears, မစ္စစ် Kurt Cobain ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ကနဦးအနေနဲ့ opioid ရှုပ်ထွေးအဖြစ်ပေါ်တံဆိပ်ထုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်စကားကိုနားထောငျ, သင်သည် provocateur Hole 2.0 နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကြိုးစားနေကြကြောင်းဘယ်တော့မှတစ်ဣတ္ဒေါသစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ အမေရိကားရဲ့ရည်းစားအဆိုပါ punky ကနေ, အတ္တနှင့်အိုင်ဒီ amok run သည် "အနံ့ဆယ်ကျော်သက်ဝိညာဉ်တော်သည်လိုပဲ" ကိုယ်ပွားရန် "ဒါပေမဲ့လည်းဂျူလီယန်, ငါသည်သင်ကသန်းနည်းနည်းအသက်ကြီးတယ်" "ငါဘာမှလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ " ကိုထိခိုက်ဖို့လုံးဝ impervious မဟုတ်, မတ်ေတာသညျ "ငါ့ကိုမှအပေါ် Hold" နှင့်အပေါ်နူးညံ့ကြင်နာမှုကိုပြသထားတယ် "ဘယ်တော့မှဂုဏ်နပုတူပါစေ။ "
Damon Albarn - "နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစက်ရုပ်"
မှုန်ဝါး နှင့် Gorillaz ကောင်လေးဝံမှသူ၏ 2014 ခုနှစ်တစ်ကိုယ်တော်စံချိန်အပေါ်ဆင်တတ်၏။ အယ်လ်ဘမ်မီးမောင်းထိုးပြ "ဟုမစ္စတာ Tembo "ဟုအဆိုပါအနုပညာရှင်တန်ဇန်းနီးယားမှတစ်ဦးအလည်အပတ်အပေါ်ကြုံတွေ့ကလေး pachyderm အမှာစကားပြောကြား။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစက်ရုပ်များ၏လောကီ, ယေဘုယျအားဖြင့် downbeat စတိုင်ဟာ uninitiated Albarn ရဲ့ကြိုးကိုင်အာဖရိကဂီတ compilations နှင့်ပင်တရုတ်သရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်း think- မယ်အဖြစ် curveball ၏အဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒန် Wilson က - "ကွောကျရှံ့ခွငျးမရှိဘဲအချစ်"
Ballroom ကဂီတ / Kobalt
ဒီနေရာတွင်တစ်ခုနက္ခတ္တဗေဒအောင်မြင်သောတေးရေးဆရာ၏စိတျထဲမှာ peek င်: တွင် "တစ်ဦးကသီချင်းတစ်စုံတစ်ရာအကြောင်း Be နိုင်သလား," ကယခင် Semisonic ရှေ့လူကိုဒန် Wilson ကသီချင်းစာသား du jour ခံစားချက်အပျေါမှာမထိနိုင်မ purports ။ သူကပုံမှန်အတိုင်းတဲ့ pop-သီချင်းမြူးချွတ်လူမိုက်ကံကောင်း: မေတ္တာ, မီဒီယာ, အထီးကျန်ဆန် ... ဒါပေမယ့်သူလည်းအတိအကျတစ်ခုအခမဲ့-form ကိုဆငျခွငျသို့ချိုး: ဒုတိယတန်း, အတိတ်ဘဝတွေကို။ ဒါဟာတစ်လောကလုံးစာရေးအဖြစ် Wilson ကန့်အခွက်တဆယ်ဖို့တစ်ဦးသေတမ်းစာပါပဲ။
Dave Matthews က - "တချို့ကမာရျနတျ"
အဘယ်သူမျှမကသူကသူ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုသွားယို-band ဒဏ္ဍာရီအတှကျအခြိနျရောကျသောအခါရော့ဖုတ်ကောင်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား start ခဲ့ပါဘူး။ သူကသူ့အုပ်စုတစ်စုရဲ့သီချင်းတွေကို၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ themes များ ယူ. သေဆုံးမှုနှင့်သက်တမ်းတိုး ( "ဒေါ", "ဒီတော့သူကပြောတယ် Lucky") စဉ်းစား, ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူး။ ထိုမင်းသည်ခဲ့တာကံကောင်း: ဒီ 2003 လွှတ်ပေးရန်ပလက်တီနမ် သွား. လည်းအခြား jamming နဲ့ပါတ်သက်ဗေဟမုတ်, phishing ၏ trey အနာတာ featured ။
Dave Pirner - "မျက်နှာများ & အမည်များ"
အဆိုပါ Soul ခိုလှုံခွင့်ရှေ့တွင်လူကို ပိုပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာထက် New Orleans မှပြောင်းရွှေ့, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုရငျးမွစျရှိခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Music ကိုအားလုံးဗီဒီယိုအမျိုးအစား, နေရာတိုင်းခဲ့လျှင်, သူကကိုက်စားကြ၏။ မိမိအတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ် ( "ရှူဖို့ငါ့ကိုသွန်သင်") R & B ( "364") ကနေ Baroque ပေါ့ပ်မှထိုလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုက aural ဘူဖေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဆိုကောင်းသော Soul ခိုလှုံခွင့်စံချိန်တူ, ကြောကျသီချင်းအဓိကပါ (ချောမွေ့ခေါင်းစဉ်လမ်းကြောင်း) ရှိပါတယ်။
ဒေါ်လိုရေစ် O'Riordan - "သင်နားထောင်ခြင်းပါသလား?"
ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ: "လူ့ဝိညာဉ်တော်သည်" တွင်အဆိုပါဇာတ်ဆောင်ပုလွေတို့သည် Cranberries ရှေ့တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ကဤအယ်လ်ဘမ်ထုတ်စစ်ဆေးဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကနားထောင်ခြင်းပါသလား? အားလုံးခြေလက်အင်္ဂါမမျှော်လင့်ဘဲလမ်းညွန်ထဲမှာသွားအတူတစ်ရေဘဝဲကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါ Cranberries protocol ကိုအားဖြင့် Unchained, အိုငျးရစျ warbler ( "ငါနှင့်အတူနေ") aggro-Pop ( "အရှုံးသမား") လှသော nu-သတ္တုသီချင်းသို့သူမ၏အံသွားနစ်မြုပ်။ နောက်ကျော 2007 ခုနှစ်, သူမကလူသူမစကားကိုနားထောင်ရှိသည်ဖို့လေယာဉ်ခရီးစဉ် crewmembers ထွက်လာကြတယ်ရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။
Donita Sparks နှင့်ကြယ်ခဏ - "transmit"
သူမသည်နှင့်အတူရောင့်ဂီတ၏တုတ်ကျင်းတွေထဲကနေစွန့် All-အမျိုးသမီးတီးဝိုင်း, L7 သူမ၏ ဂျုံး Jett နှင့်ကြယ်ခဏနှင့်အတူ '' 60 ဒီလွှတ်ပေးရေးအပေါ် choruses ၏ glossier ပို taut သီချင်း။ About.com ဒါဝိဒ် Lablinsky ဟုခေါ်တွင် 2008 ခုနှစ်စံချိန် နှင့်အတူ "တစ်ဦးအထင်ကြီး, ကွဲပြားခြားနားတစ်ကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက်" "သဘောထားကအများကြီး။ " တစျခုမှာထိုကဲ့သို့သောရော့ခ်စစ်သည်တော်ကနေမနည်းမျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။
Doug Martsch - "အခုဆိုရင်သင်သိ"
ဦးခေါင်း honcho ယိုဖိတ်ရန်တည်ဆောက်လူအများစုကသူတို့တပြင်လုံးကိုအသက်ဝိညာဉ်ရှိထက်ကသူ့၏စီးဆင်းမုတ်ဆိတ်အတွက်ပိုပြီးအခွက်တဆယ်ရှိပါသည်။ overdubbed အသံနှင့်သံမဏိရင်ခွင်ဂစ်တာ clanging နှင့်ကုပ်ခြစ်နှင့်အတူ, သူတောင်အားမိမိ Indie ပညာရှိကြာပါသည်။ "အိပ်မက်" ဟုအဆိုပါ၏အဖျားခတ်-ကုလားထိုင်အေးမြ Cutie များအတွက်မရဏ Cab "Gone" ၏ thrum ... အခုဆိုရင်သင်ဟာပြင်ပမှာစိုစွတ်သော, ရင်ခုန်စရာနွေရာသီညဖို့တေးသံဖြစ်ပါတယ်သိမှတ်ကြလော့။
Eddie Vedder - "Ukulele Songs ရဲ့"
Aloha ၏ဝိညာဉျတျောမှဤဒုတိယတစ်ကိုယ်တော်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်စိမ် ပုလဲ Jam ရှေ့လူကို။ တစ်ဦး avid surfer, Vedder 16 breezy ပုဒ်ဖြတ်ပြီးဟာဝိုင်ယီခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ သူတို့က "က World Wide သေကြောင်းကြံစည်မှု" "အသကျရှငျ" သို့မဟုတ်၏ grit နေဝေးအျောဟစျသံခဲ့ကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲကျေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ, "ဟေ့ Fahkah" ကျွန်းဘန်းစကားမျှမက, သူကသူ့မိတ်ဆွေ, ဘေ့စဘောစစ်ဆင်ရေး Theo Epstein ၏ချီကာဂိုပေါက်တွေကိုသမ္မတကနေနှစျလိုဖှယျတစ်ကျိန်စာစကားလုံးပါပဲ။
အီဗန် Dando - "ကလေးငါပျင်းတယ်"
မိမိအ Lemonheads 1997 ခုနှစ်တွင်၎င်းတို့၏မူလစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးသွားကတည်းက Dando ရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်တချို့ရယ်မိုက်ခရက်ဒစ်ရှိပါတယ်။ "ငါးဖမ်း reel" (Spacehog ရဲ့ Royston Langdon အပါအဝင်) အမျိုးမျိုးသောရှေးရှေးက "marxophone," က "သစ်ကုလားအုပ်တစ်ကောင်သည်ပတ်သာကို" နှင့်ပင်ကစားဒါဟာပေါ့လျော့င် မဲလင့်လောင်စာများ Fiona Apple နဲ့မှန်မှန်ပူးပေါင်းအပေါ်သှားသော audiophile Jon Brion ကအတူတူချုပ်။ ကလေးငါပျင်းတယ်ခေါင်းဆောင်များမှတ်တမ်းများ '' ထက်ပိုမိုနှေးကွေးအရှိန်အဟုန်မှာတတ်ပေမယ့်နေဆဲကောင်းသောအဟောင်း Dando အဆိုးမြင်ကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖရန့်က Black - "ဖရန့်က Black"
လက်ျာဘက်ကသူ၏ trailblazing ကောလိပ်ရော့ခ်တီးဝိုင်း, အပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားသော ယင်း Pixies လည်း Black က Francis ကနှင့်ချားလ်စ် Thompson က IV အဖြစ်လူသိများသည့်လူသည်မိမိတစ်ကိုယ်တော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့ headfirst ချိုးငှက်, တက်ခြိုးဖဲ့၏။ ဒါဟာ 1993 ခုနှစ်ယဇ် Pixies '' ဂီတအဖြစ်ပေမယ့်တစ်ဦး surfier, sunnier လှည့်ကွက်တွေနဲ့အတူတူသွေးကြော၌ရှိ၏။ ခဲတစ်ခုတည်း "Los Angeles မြို့က" Tee ဖို့ titular ဒေသဖော်ပြပေးသောဘောလုံး-to-The-မြို့ရိုးကို weirdness- ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကတစ်ကိုယ်တော်သွားသောအခါသည်မိမိအိမ်ထောင်ဖက်လိုပဲ, အဘယ်သူမျှမသံသယရဲ့ Gwen Stefanie, Rossdale တစ် poppier ဦးတည်သွား၏။ သမ္မတဘုရ်ှရဲ့ရောင့်ဂီတ၏အစက်အပြောက်ဘော့ရော့ခ်တို့က Wanderlust ရုံ lushly ထုတ်လုပ်သီချင်းများတွင်တွေ့သည်ကိုမရ။ သူကနေဧည့်သည်အစက်အပြောက်ခဲအဖြစ် Rossdale ရဲ့ pals, လူတွေအတွက်အရှိန်မြှင့် အမှိုက်ရဲ့ဒေါ်ရှယ်လီ Manson , သံခမောက်လုံးရဲ့ခရစ် Traynor နှင့်လင်ဒါပယ်ရီ။
Glen Phillips က - "Tornillo"
Glen Phillips က
ဘားပြုပ်ဟာစိုစွတ် Sprocket ရဲ့ပျော့-ပြောပြီအဆိုတော်မိမိအပေါ်အယ်လ်ဘမ်၏ oodles လွှတ်ပေးရန်, တီးဝိုင်းရဲ့ကျချိန်ကာလအတွင်းရိုင်းသွား၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုသုန်မှုန်အသံပညာနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာလှုပ်ရှား, ဒါပေမယ့်ခုန်အထုပ်အထက်တွင်ကြောင်းဒီ "ရှုံးနိမ့်" အသံဖမ်းပါပဲ။ ထိုအသားစိမ်း, သွေးထွက်-နှလုံးသီချင်းအများစုကဆောင်းရာသီနွေရာသီအဘို့အချေ 2005 ခုနှစ်ရဲ့အဘို့အအခုမှခဲ့ကြသည်။ သို့သော် Tornillo အပေါ်ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူး, သတ်မရှိလုပ်ပိုင်ဗားရှင်း ( "ဝက်အူ" အတွက်စပိန်) ပို. ပင်ချုပ်ကိုင်ထားကြသည်။ နောက်ထပ် "
ဂရေဟမ် Coxon - "မဂ္ဂဇင်းများအတွက်ပျော်ရွှင်မှု
သူ Blur ရဲ့ lineup ၏အတွင်းနှင့်ထွက်ပွူနေစဉ်, Coxon တစ် seesawing တစ်ကိုယ်တော် oeuvre အတု။ အတော်များများကဒီ 2004 ခုတ် 'n' အကျွမ်းတဝင် Britpop စွမ်းအင်နှင့်အစိုင်အခဲကျောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ခြင်း, သူ့အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်လွှတ်ပေးရန်ကိုကြွေးကြော်။ "အံ့မခန်း" ၎င်း၏အမည်ကိုမှတက်နေထိုင်ခဲ့ ပိုပြီးလူတွေလည်းမနည်း Ferrell ထက် cowbell ပြင်း ။ ပျော်ရွှင်မှု downstrokes နှင့်ရင်းနှီးစွာအင်္ဂလိပ် enunciation နှင့်အတူ wallpapered တစ်ဦးတော့ Pogo အိပ်မက်ခဲ့သည်။
Gwen Stefanie - "မေတ္တာအိန်ဂျယ်ဂီတကလေး"
သူမသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထက်လျော့နည်းအတွက်ရက်ဂေး / dancehall ဝါသနာအိုးတမှစကားတေးဂီတမိဖုရားကနေသွား, အရွယ်အစားအဘို့အသစ်အမျိုးအစားကြိုးစားနေကိုကြောက်ခဲ့တာဘယ်တော့မှရဲ့။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမလာမယ့်သိုးသငယ်ကိုငါမြင်ပြီနိုင်ဘူး။ ၎င်း၏ယခုကိစ္စအတွက်ရှက်စရာမလိုဟု bubblegum နှင့် hip-hop လွှမ်းမိုးမှု Katy Perry နဲ့လေဒီဂါဂါ၏နန်းစံကြိုဟောခဲ့တယ်။ "Hollaback မိန်းကလေး" ကဲ့သို့သီချင်းများနေဆဲလူငယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူ resonate နှင့် Stefanie ပူးပေါင်းအတူသူမ၏ 2004 တစ်ကိုယ်တော်အားထုတ်မှုစတိုင်ထွက်သွားဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
Isobel ကမ့်ဘဲလ် - "Amorino"
ဒါကြောင့်တစ်ဦးအဘို့အဖြစ်နိုင် Belle & Sebastian ဟောင်း Pat သူမ၏ bookish မူလထက်ပင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရဖို့? အဖြေဟုတ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူက 2003 ရဲ့ Amorino ၏လှပသောဂီတ-box ကိုဆွဲလဲမှု။ မွှေး, wispy ကမ့်ဘဲလ်သူမ၏ဟောင်းတဦးတီးဝိုင်းများ၏ earthier element တွေကိုကူးပြောင်းနေရာနှငျ့ကွိုး ( "ညံ့ဖျင်းသောလိပ်ပြာ"), coquettish mod ( "ဂျော်နီမူလစာမျက်နှာလာကြ") နှင့်အတူကအေးအေးဆေးဆေး လက်သမားစဉျးစားဆငျခွ ( "အချိန်ရုံအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်") ။ ဤမှတ်တမ်းပြီးနောက်သူမလွှတ်ပေးတစ်ဦး string ကိုအပေါ် guttural မာကု Lanegan နှင့်အတူတွဲ။
ဂျေ Mascis - "တစ်ဦးစတားမှချည်ထားသော"
တစ်ဦးဂစ်တာ virtuoso တစ်ခဲ့သည်ဆို၏-ပြန်တစ်ကိုယ်တော်စံချိန်ထွက်ကိုထည့်လေ့မရှိသည့်အခါ, တစ်ဦးတစ်မှေးအိပ်ဖြစ်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုပြေး။ တစ်စတားမှချည်ထားသောဘူး။ 2014 ခုနှစ်လွှတ်ပေးရေးဒိုင်နိုဆောဂျူနီယာ Multi-ခွက်တဆယ်၏လျင်မြန်သွက်လက်ကောက်နှင့်အတူ glistens ။ မိမိအ vocal သူတို့ရဲ့လောင်သောအသံနှင့်အားနည်းချက်အတွက်နောင်တမယူဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းအတွေးအတွက်နက်ရှိုင်းသောပြတင်းပေါက်အထဲကစိုက်ကြည့်နေချိန်တွင်စကားကိုနားထောင်ဂီတ၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖျက်ဆီးနိုင်အောင်ကောင်းစွာပွဲခံပါဘူး။
Jakob Dylan - "အမျိုးသမီးများ + နိုင်ငံ"
မိမိအကျော်ကြားဖေ, ဘော့, ဝေဖန်သူများက၏ထုနှင့်ရှုပ်ထွေး braving, နိုင်ငံဂီတသို့အလားတူခရီးကိုယူ။ အငယ် Dylan , နောက်ကျ Wallflowers ၏, မြို့ပြအနောက်တိုင်းဖိနပ်အပေါ်ကြိုးစားကြရန်သူ၏ဖြောင့်-up, ရော့ခ်စွန့်ခွာဘို့ flak ယူကြပြီမယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပုန်ကန်သောနှလုံး Neko ဖြစ်ရပ်မှန် backup လုပ်ထားသီဆိုအထူးသဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ him- အပေါ်ကောင်းသောပြောကြပါတယ်။
ဂျိမ်း Iha - "ပုက Sky မျှော်ကြည့်"
မိမိအ 1998 တစ်ကိုယ်တော်မှတ်တမ်းတင်ထက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသဘောပေါက် outing, (ဗာဂျင်း) ဒါဟာ Down လာပါစေ, ဒီ 2012 တွင်ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ယခင်ရွှေဖရုံသီးရဲ့လှိုင်းသစ်၏အမြင် featured ။ Iha အမြဲ Pop-ကျောက်လုံးကြီးတစ်ခုဆှဖှေဲ့ခဲ့ပေမယ့်ဒီဆယ်စုနှစ်-in-the-ချမှတ်ခြင်းအယ်လ်ဘမ်သူအပြည့်အဝ Thompson ကအမွှာပူးနှင့်ယေရှုနှင့်မာရိသည် Chain ဘို့သူ့မေတ္တာကိုစူးစမ်းဖို့တယ်ထှကျလာ၏အထိပါပဲ။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ အဆိုပါဂစ်တာသမားရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့အသံနှင့် lovesick ဂီတမိတ်ဆက်ပြသ "ဘယ်မှာသိသူကားအဘယ်သူစေရန်" ကဲ့သို့ဆော့ဖကလေးချော့တေ။
အဆိုပါ Britpop Puck ကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံး comfy ရန်နိုက်ကလပ်ထဲကနေကြည့်အမျှပြော့ဖရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့အနားပျော့ပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ မိမိအ Self-အမည်ရ 2006 တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်တွင်သူသည် 1970 လေးရေဒီယိုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မိမိနောက်ကျော catalog combed ။ သူသည်ဒါဝိဒ် Bowie (ထို quavering "က Black Magic") ကနေချေး Leonard က Cohen ကို ကို (ဖှယျစန္ဒရား-and ညှို့သီချင်း "ဒစ္စနေးအချိန်") နှင့် အဆိုပါကျဆုံးခြင်း ( "အဆီကလေးများ" ၏ angular အဓိကရုဏ်း) ။ အမြည်းမှရာမှမဆိုးဘူဖေး။
ဂျေး Farrar - "Terroir ချယ်လ်ဆီးအသင်း"
အယ်လ်ဘမ်၏တစ်ဦးကရင်းနှီးမြှပ်နှံမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ, Terroir ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာပွင့်လင်းအနောက်ဖို့တောင်ပိုင်းရွ့ထံမှဟောင်းဦးလေး Tupelo အဖွဲ့ဝင်ကြာပါသည်။ ဒါဟာဆလိုက်ဂစ်တာအတူဖုန်ထူသရဲခြောက်ခြင်းနှင့် syrupy ပါပဲ။ အဆိုပါအဆိုတော်ရဲ့ drawl alt + တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်ပြီး, ဒီ 2003 အလုပ်အပေါ်သေး laidback စိတ်ပိုင်းဖြတ်အသံ။ "အဘယ်သူမျှမ Rolling နောက်သို့" ၏ mellow clime ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူကိုသို့အရည်ပျော်; နှင့်ကောင်းကင်ပြာ-ခညျြနှောငျ lovelorn "ခက်ကတော့ကျဆုံးခြင်း Is" ဟုဂန္ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျယ်ရီ Cantrell - "Boggy Depot"
ပန်းသီးဟာပေါ်တွင်သစ်ပင်ကနေယခုအချိန်အထိမကျခဲ့ပါဘူး ချည်နှောင်အဲလစ် ဂစ်တာသမားရဲ့တစ်ကိုယ်တော် breakout ။ မိမိအ gravelly စကားသံကိုနိုင်အောင်ကဒီသုန်မှုန်င့်ဂီတစုဆောင်းမှုအပေါ်တစ်ဦးတည်းကယ့်သဘာဝတိုးတက်မှုကြီးကအမြဲ Layne Staley ရဲ့ဦးဆောင်ကောင်းစွာဖြည့်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါတစ်ခုတည်းမပိုဒီတော့လျှင်သူ၏အဓိကတီးဝိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသီချင်းမဆိုထက်, ကားမောင်းအဖြစ်ခဲ့တယ် "ထဲမှာသင်က Cut" ။ (က Mike Inez နဲ့ Sean Kinney Boggy Depot အပေါ်ထင်ရှားကျော်ကြားသော AIC chums ကျေးဇူးတင်ဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင်အတွက်ဖြတ်တောက်ခဲ့ကြ လေ၏က Les Claypool နှင့်အန်ဂျလို Moore နဲ့ Fishbone ဂျွန် Norwood Fisher က။ )
ယောဟနျသ Frusciante - "အဆိုပါ Empyrean"
ကနေရှေးခယျြဖို့ဆရာယောဟနျ Frusciante တစ်ကိုယ်တော်အဘယ်အလုပ်ကိုမျှမရှိခြင်းရှိပါတယ်။ ယခင် နီဟော့ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်း ဂစ်တာသမားမနည်း 11 ထက် LPs အဖြစ်တစ်နှစ်ခွဲ-တစ်ဒါဇင် EPS ထွက်ထားလိုက်ပါတယ်။ နံပါတ် 1 ခေါင်းစဉ်အကြံပြုသကဲ့သို့ regal အသံတော်မူသော 2009 ပြည့်အဝအလျားဖြစ်ပါသည်အဖြစ်တသမတ်တည်းပရိသတ်တွေအကြားအဆင့်။ ယင်းက rip-ဟောက်ဖောက်တံကနေ "ဟုအစမပြုမီ," ၏မုတ်-မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အား "လက်လှမ်းမမှီပါ" ဟုအဆိုပါသော့များနှင့်ခြောက်-string ကို yawping ဖို့ "Ah က Yom," ကငရုတ်ကောင်းနေဖြင့်ပွိုအကွာအဝေးတယ်ပါတယ်။ (bass သမားဟာပြင် Smith ဂစ်တာသမားဂျော်နီ Marr မအဖြစ်တစ်ဦးလက်ကိုချေးမ။ )
ဂျူလီယန် Hatfield - "ဟေ့သူငယ်"
မက်ဆာချူးဆက်ထံမှဤသည် kewpie ဒါတီထွင်ခဲ့တယ်ခဲ့ - သူမ၏တစ်ကိုယ်တော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် Blake ကကလေးသူငယ်များသည် Lemonheads သည်ဂျူလီယာ Hatfield သုံးခုနှင့်မိုင်းနားအဲလ်ပ်တောင်တန်းနှင့်အတူကစားခြင်း - ကဂီတယခုအချိန်တွင် defining ရုံတစျခုရွေးချယ်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေ့သူငယ်, သောဆုကြာ 1992 ခုနှစ်ရဲ့သူမရဲ့ပွဲဦးထွက်ပါပဲ။ ဒါဟာ ( "ရုပ်ဆိုး") ရောင့်ဂီတ ( "Nirvana") မှ odes နှင့်တိုက်ပိတ်ရှင်ကြီးနှင့်အတူသူမ၏ alt + ရော့ခ် pout ပေါင်းစပ်ပြီးတစ်စုံလင်သော "က၎င်း၏အချိန်" စံချိန်ပါပဲ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါအကြှနျုပျ၏ဒီတော့-ခေါ်ဘဝ Angela Chase သူမ၏သိပ်ကြိုက်တယ်။
ဂျူလီပျက်စီးခြင်း - "ဂျူလီပျက်စီးခြင်း"
သူမ၏အစွန်းရောက်ရော့ခ်တီးဝိုင်းပြီးနောက် ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သတ် 1997 ခုနှစ်တွင်ခွဲထွက်, Kathleen Hanna အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖို့ကားဂိုဒေါင်ထဲကနေသူမရဲ့အသံကအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ သူမသည် misogyny ဆန့်ကျင်ဂစ်တာနှင့် Sears စကားလုံးများကို gargling, စီမံကိန်းဂျူလီပျက်စီးခြင်း, အသံနမူနာနှင့်အတူရှိနေသည်စံချိန်တင်လို့ခေါ်ကြတယ်။ ဒါဟာတိုက်ပွဲများရဲ့အနေလိုင်း nicked "ငါသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ဘယ်အရာကိုသိလို" one- သိရန်တစ်တော်လှန်ရေးသမားကြာ "Brixton ၏ Guns ။ " ဒီဂျူလီပျက်စီးခြင်း (ထို "က" သတိထားမိ) တစ်နောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူ 2013 ခုနှစ်အသံအတိုးအကျယ်ကိုတက် pumped အယ်လ်ဘမ်နှင့်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သတ် bass သမားပါဝင်သည်ကြောင်း Full-တီးဝိုင်း lineup Kathy Wilcox ။
Kristin Hersh - "တင်ပါးနှင့်သူများ"
သူမ၏စာအုပ် 'အတွက်, Rat မိန်းကလေး, ထိုပစ်ပေါက်မူဆယ်ကြိုးကိုင်သူ တစ်ဦးစိတ်ကြွရောဂါနှင့်သူမ၏ဦးခေါင်း၌သီခငျြးမြားအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုခံ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ / ကျိန်စာဖော်ပြသည်။ သူမသည်ဂီတ၏ရောက်လာမထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး, သူမကသူတို့ကိုအားဖြင့်သိမ်းယူဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်. , အဆိုပါဂီတနှင့်စကားများအပြစ်ကိုပယ်ရှားဖို့ရှိပါတယ်။ Hersh သည်မိမိအဆူး-wire ကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ဂစ်တာနည်းစနစ်နှင့်အတူတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူမ၏ 1994 တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်အကောင်းဆုံးသူမ၏က aural စဉ်အတွင်း, မလွှတ်ဘဲမနေတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို-shattering ဝန်ခံချက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
Lee က Ranaldo - "တိုင်းမ်နှင့်သိတင်းကိုကြား"
Sonic လူငယ်၏ဒါချေါဒုတိယဆော့လျှော့မတွက်ဘူး။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲ Multi-ပြဌာန်းမှုနှင့်အဆိုတော်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အံ့သြဖွယ်လိုက်တယ်နှင့်အတူ brimming မိမိတစ်ဦးကိုပြန်လည် catalog ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ့်ဟောင်းတဦးတီးဝိုင်းအိမ်ထောင်ဖက် Thurston Moore ကကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်တွင် Ranaldo ထားသောဤ 2012 ခုနှစ်တစ်ကိုယ်တော်အားထုတ်မှုပါပဲ။ ဆူညံခြေနင်းသူ၏လက်မှတ်အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူ entwined သည်သူ၏ရိုးရှင်းတဲ့အသံချဉ်းကပ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ် strums, အချို့ဘုရားသခငျ့ဗီနိုင်းနားကိုသကြားလုံးအဘို့လုပ်ရမည်။
Linda ပယ်ရီ - "လေယာဉ်ခရီးစဉ်များတွင်"
"ငါသည်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည် / သညျယရှေုငါ့ကိုယုံကြည်ပါသလား Uninvited "ယခင်မဟုတ်သော Blonde ကော်ဖီဆိုင်တရားဟောချက်အပေါ်ဤသို့တောငျး" ။ "ဒါကတစ်ကိုယ်တော် outing အံ့ဘွယ်သောအပင်ပန်းခြင်းနှင့် wackiness ပြည့်ဝ၏။ အရာမူး, sleezy ဖျဆဲလ်ဂန္နေစာမျက်နှာကြာပေးသော "Fruitloop နေ့ခင်းအိပ်မက်" ဟုအဆိုပါ Saloon swinger အတွက်အလင်းနှင့် jovial get "ထင်းမတ်ေတာသညျ။ " ဟုအဆိုပါပစ္စည်းဒါအများကြီးဒီမှာသီချင်းရေးစွမ်းရည်၏တီးတိုးခခြှေဲနဲ့တူတာမျိုးအပေါ်သူမကိုသရုပ်ပြချင်ပါတယ် P! NK ရဲ့ "ဟုအဆိုပါပါတီ Started Get" နှင့် Christina Aguilera ရဲ့ "တင့်တယ်။ " လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှာတော့ဒီဂီတကျွမ်းကျင်သူများ၏ကမ်ဘာဦးကဖမ်းယူ။
မာကု Lanegan - "Bubblegum"
ဒီအယ်လ်ဘမ်ကဒီစာရင်း၏စည်းမျဉ်းတစ်ခုချွင်းချက်စေသည်ဖြစ်သောမာ့ခ် Lanegan Band မှအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဧည့်သည်အဆိုတော်များ (၏ထိုကဲ့သို့သောကြွယ်ဝသော၎င်းပြင်ဆင်အတူ PJ Harvey , အာဖဂန် Whigs ၏ Greg Dulli, Duff နဲ့ Izzy Guns ထံမှ N 'Roses), အဲဒါကိုထည့်သွင်းရန်မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပါလိမ့်မယ်။ အော်ဟစ်သစ်ပင်များနဲ့သူ့ရဲ့အချိန် gravelly ထုတ်ဖော်ပြောဆို Lanegan တစ်ပလက်ဖောင်းအားပေးသဖြင့်, Bubblegum သူ့ကို smoky-roomed balladry နှင့်နစ်ခ်ဂူကဲ့သို့မဲလိုဒရမ်မာစူးစမ်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
သူ Mike Patton - "မန်းဒမသွားခင်"
ကောင်လေးအဆိုတော်နှင့်ရဲ့ No More zany ခဲညည်းတွားမြည်တမ်းနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကအကြောင်းကိုသင်သည်အဘယ်သို့လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောဂီတ pies ၌သူ၏လက်ချောင်းများနှင့်အတူ, အီတလီပေါ့ပ်စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်သူ၏ရုပ်ရှင်ယူသူလုပ်နိုင်သည့် strangest အရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ (ဆိုလိုသည်မှာ Voice ကိုများအတွက်အရွယ်ရောက် Themes အပေါ်အော်ဟစ်အဆိုပါ primal ဖြစ်ခဲ့သည်။ ) 40-piece အသံစုံတီးဝိုင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင် 15 ဦးတီးဝိုင်းအတူ, Patton tradition- အပေါ် ape သွား. လူများကကိုချစ်၏။
နီနာဂေါ်ဒွန် - "ယနေ့ညနှင့် My Life ၏ကျန်"
လက်နက်အတွက်သူမ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှမ, Louise Post ကိုသူမ၏အဆုံးစွန်သောနေ့ဂီတနှင့်အတူမြို့ရိုးဘောလုံးသွား၏သွားရမည်အကြောင်း, သူချင်း Veruca ဆား ဦးဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဂေါ်ဒွန်ခေတ်ပြိုင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသွား၏။ ယနေ့ည (တပ်စခန်း / ဂက်ဖင်) ကိုသင်ကိုင်ထားရန် VS ရဲ့ 1998 လွှတ်ပေးရန်ပေါ်တက်ဖြတ်တောက်ရန်စတင်ခဲ့ကြောင်းသူမ၏ပေါ့ပ်ပညာရှိ, ရှစ်လက်နက်စို့တဲ့ပုံစံမျိုးစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမရဲ့တစ်ကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက် sugary ပါပြီမယ်, ဒါပေမယ့် Gordon ရဲ့ Tinkerbell အသံကနားထောင်ဖို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
နီနာ Persson - "တိရိစ္ဆာန်နှလုံးသား"
perky ဆွီဒင်ရော့ခ်-Pop ကျွမ်းကျင်သူအဆိုပါ Cardigans မှစ. မီးရှူးတိုင်သီချင်းဆိုရန်, ဒီစွယ်စုံအနုပညာရှင်သူမ၏ 2014 အယ်လ်ဘမ်အပေါ်အများဆုံးချက်သူမ၏အတောင်ပံပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ သူမသည် lissome "ဆီအဘို့အ Bridges ထွန်းခြင်း" နှင့်ပေါ်မှာအများကြီးဒစ္စကို diva အပေါ်အနည်းငယ် Stevie Nick င်သူမသည်မရှိတော့ပါa"ကို Lovefool" ဖွသူမ၏ခါးပတ်အောက်မှာလုံလောက်အောင်နှစ်ပေါင်းရတယ်ရဲ့ "သားရဲများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာ။ "; ယခုသူမသစ္စာသည်အမဲလိုက်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦး Full-စိုက်ပျိုးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
နို Gallagher ရဲ့အမြင့်ပျံငှက်များ - "S / T က"
နှစ်ဦးကဒီဂိမ်းမှာဆော့ကစားနိုငျပါသညျ! နိုနှင့်သူ၏အစ်ကို Liam နောက်ဆုံးသောကာလအဘို့စစ် တိုက်. နှင့်တပြိုင်နက် 2009 ခုနှစ်အိုအေစစ်တက်ဖဲ့ သောသူတို့, အသက်ကြီး Gallagher ငျ့ပျံငှက်များနှင့်အတူမြင့်တက်; နည်းနည်း bro Liam Beady မျက်လုံးမှသူနှင့်အတူအိုအေစစ်၏ကောင်းတစ်ဦးအတုံးကိုယူ။ Beady မျက်လုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အိုအေစစ် 2.0 ခဲ့သွားရမည်အကြောင်း, နိုရဲ့လိုက်စားပိုပြီး esoteric ဖြစ်ခဲ့သည်။ "နာရီ Stop" ကဲ့သို့သီချင်းများ "စိန်နှင့်အတူက Sky အတွက် Lucy," နှင့်ဒစ္စကိုကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ဂစ်တာရော့ခ် yanked "ဟုဘဝကအဘယ်အရာကို AKA" ကဲ့သို့တောက်ပနေပါသတဲ့။ မနေ့ကတှဲဖကျ HFBs '' နောက်ဆက်တွဲ, မတ်လ 3, 2015 ထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပယ်ရီ Farrell - "သီချင်းသို့ရာတွင် Sung ခံရစေရန်"
"ဟေ့လူတိုင်း / သူတို့ကကြီးထွားဖို့အချိန်ရဲ့ဆိုသညျကား," ဟာဂျိန်းရဲ့စွဲလမ်းမှုဂုရု သည်သူ၏ 2001 အယ်လ်ဘမ်ခေါင်းစဉ်လမ်းကြောင်းအတွက်သီဆို။ Pyros များအတွက်ဂျိန်းရဲ့နှင့်ဘေးထွက်စီမံကိန်းကို Porno ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ဘာသာရေးရာရေကြိုးစားကြည့်မယ်လို့ပေမယ် Farrell ဒီစုဆောင်းမှုတို့အတွက်ဂျူးဘာသာ၏နက်ရှိုင်းသောအဆုံးသို့ချိုးငှက်။ သီချင်းတွေ Farrell အမြဲပြသသောတူညီ time- တစ်ဦးရိုနှင့်လက်ဆောင်တစ်ခုမှာရှေးခေတ်နှင့်အနာဂတ်အသံ။
Petra Haden - Petra Haden သီချင်းသီဆို: အဆိုပါထဲကရောင်းအဘယ်သူသည် "
တစ်ဦးက capella artistry (Pentatonix, ဂေါက်ပြီးပြည့်စုံသောရှု) ယခု Vogue en ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ပြန် 2005 ခုနှစ်ကပြင်အသစ်အဆန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းခွေးအထိပါပဲ။ ရဲ့ Multi-ပါရမီ Petra Haden တစ်ဦးကိုအဘယ်သူဂန္ဖို့တူရိယာ-လျော့နည်းသီချင်းဆိုစတိုင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းစတူဒီယိုမှော်တစ်ဦးအလုပ်ရဲ့ မိုက် Watt Haden ထဲကရောင်းတစ်ဦး 8-လမ်းကြောင်းမိတ္တူပေးတဲ့သူ။ အဆိုပါရလဒ်တစ်ထူးထူးဆန်းဆန်း, စွဲလမ်းစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြစ်ချောင်းများ Cuomo - "တစ်ယောက်တည်း II ကို: မြစ်ချောင်းများ Cuomo ၏နေအိမ်မှတ်တမ်းများ"
လုပ်ပြီး Buddy Holly တူသူကောင်လေးထံမှရှားပါးအသံ၏ဒုတိယအုပ်စု။ တစ်ဦးတည်း II ကိုထံမှအခဲအတွက်ပစ်ချ ပျောက် Weezer အာကာသအော်ပရာ နောက်ဆုံးမှာအတူတန်ခိုးတော်-Pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့နှင့်တစ်အရိုးဗားရှင်း "ပါတီရပ်တန့်လို့မရပါ," Lil Wayne ။ (ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပိုင်ခွင့်ကိုဖတ်ပါ။ ) ဒီ၏ Raditude စုဆောင်းခြင်းသည်ဤပို့လိုက်ကြတယ်အများအပြားတီးလုံး Weez ပြီးစီးခဲ့ကဲ့သို့ကြောက်မက်ဘွယ်အသံကြောင့် rarities ။
ရော့သောမတ်စ် - "Be ရန်တစ်ခုခု"
Matchbox 20 ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုနှောင်းပိုင်း '' 90 ခံစားခဲ့ရ သည့် quintessential တဲ့ pop-ရော့ခ်တီးဝိုင်းအဖြစ်။ ထို့နောက်သူတို့၏အဆိုတော် Santana နှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်ပင်ပိုကြီးတယ်။ သဘာဝတိုးတက်မှုကမ္ဘာကြီးဟာတစ်ကိုယ်တော်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ "Lonely အဘယ်သူမျှမပို," ၏သွေးကြောထဲမှာခြောက်ချားအရေအတွက်ကို Lenny Kravitz , ရွှေ သွား. အရွယ်ရောက်ခေတ်ပြိုင်ဇယားပေါ်ကနေသူ့ဟာသူစိုက်၏။
ရော့ဖုတ်ကောင် - "Hellbilly Deluxe"
သူတို့အားမာရ်နတ်ဦးချိုမြှင့်ခြင်းနှင့် Hellbilly အိမ်တော်၌သင်တို့ head- bang! White ကဖုတ်ကောင်ဆောငျနှင့် နောက်ဆုံးထိတ်လန့်ညွှန်ကြားရေးမှူး Rob Zombie ဒီကြိတ်စက်မှု / သတ္တုစပ်တွေနဲ့လစာဖုန်နှိပ်ပါ။ ဒါဟာ MTV အတွက်လုံလောက်သောမှတ်မိလွယ်တဲ့ပေမယ့်မြေအောက်အဘို့အလုံလောက်အောင်ကျောချမ်းဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "Dragula" နေဆဲငါတို့အသွေးကိုသွန်းမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းရရှိသွားတဲ့။
Scott Weiland - "12 ဘားချယ်လ်ဆီးအသင်း"
တစ်ဦးင့်ဂီတမင်းသားတစ်ဦးအာကာသ Odyssey အပေါ်သွားသည့်အခါဘာဖြစ်မည်နည်း သငျသညျကနေဒီပွဲဦးထွက်တစ်ကိုယ်တော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအရ အဆိုပါ flamboyant ကျောက်ခေတ်ဘုရားကျောင်းလေယာဉ်မှူးအဆိုတော် ။ သူကကြယ်ပွင့်-ခညျြနှောငျခေါင်းကိုခရီးစဉ် ( "Barbarella"), Pseudo-စက်မှုဇုန်အညစျအကွေး ( "Cool Kiss") နှင့် smoky barroom Waltz ( "သမ္မတကတော်, သင့်ရဲ့ခေါင်မိုးငါ့ကို Down ဆောင်ကြဉ်း") မှာမိမိလက်ကိုကြိုးစားပါတယ်။ မှတ်စု၏: Sheryl Crow အဘိဓါန်အဆုံးစွန်သောသီချင်းအပေါ်ဥရောပစတိုင်အကော်ဒီယန်ပေးပါသည်။
လျှော့ချ - "လျှော့ချ"
ဒရူးဒုတိယ Hatter Guns N 'Roses သည်သူ၏တစ်ကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက်သည်မိမိမိတ်ဆွေအနည်းငယ်ခေါ်များနှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့ virtuoso ဂစ်တာ၏တကယျ့လက်ဖက်ရည်ပါတီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ '' 90 ရော့ခ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျနော်တို့ (ခရစ်ကော်နဲလ် featuring) ကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဘိန်း "ကတိ" ကိုထုတ်စစ်ဆေးနေအကြံပြုသည်ပြာလယ်ပိုင်းတစ်ခုရဲ့ tempo (နှင့်အတူ "ငါသည်တွင်ကိုင်ထားပါ" Kid Rock က ) နှင့်သင့်လျော်စွာ Ariane ထဲ "စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဒီ" (ထံမှ cameos နှင့်အတူ Dave Grohl နှင့် Duff McKagan) ။
တန်ယာ Donelly - "အရှုံးသမားများအတွက် Lovesongs"
90 ရော့ခ် '' ၏အရှိဆုံးကောငျးကငျတအသံတွေကိုတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်, Donelly ဘဝမှမူဆယ်နှင့်မြိုးဆကျဖြင့်ပစ်ပေါက်အရေးကြီးသောခညျြအနှောဆောင်ကြဉ်းကူညီပေးခဲ့သည်။ Belly နှင့်အတူသူမတစ်ဦးကဗျာဆရာနှင့်ရှေ့မိန်းမကဲ့သို့မြင့်တက် ။ သူမ၏တစ်ကိုယ်တော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်အတူသူမ၏ဦးခေါင်းခွံဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် savory အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများ out- အပေါငျးတို့သအနှစ်ပါစေအက်။ ဤရွေ့ကားဆန့်ကျင်ဘက်သူမ၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ပိတ်အကျိုးတူအပေါ််တယ်သော gelled ။ ဒါဟာသူမအရှိဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောစူးစမ်း၏ Gusto ထိန်းသိမ်းထားပေမယ်စိတ်အားထက်သန်စွာခေတ်ရေစီးကြောင်း၏လက်ကျင်းပခဲ့သည်။
Thom ဒွိုက် - "နေတဲ့ Eraser"
Radiohead ရဲ့ ရှေ့လူသည်မိမိ 2006 တစ်ကိုယ်တော် outing အဘို့ခရီးစဉ်ကို-hop သွားလေ၏။ မိမိအတီးဝိုင်းရဲ့ Post-နှစ်တစ်ထောင်ဂီတ၏တာလိုပဲ, သနေတဲ့ Eraser skittering စည်းချက်နှင့်ဒွိုက်၏ lonesome အော်ဟစ်သောအသံကိုအပေါ်မှီခို။ အယ်လ်ဘမ်သာသူ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောသော်လည်း, သူချင်းဌာနမှူး Jonny Greenwood ခေါင်းစဉ်လမ်းကြောင်းများအတွက်စန္ဒရားပေါ် plunked ။ "ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် Atom" ၏အဖျားအိပ်မက်လည်း Nigel Godrich, ဟာပြင်, ဂျို Waronker နှင့် Mauro Refosco နှင့်အတူဒွိုက်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပူးပေါင်းမှုတ်သွင်း။
Thurston Moore က - "အကြားအမြင်ရနှလုံး"
DGC / ဂက်ဖင်
(နောက်ပိုင်းသူ့ဇနီးနဲ့တီးဝိုင်းအိမ်ထောင်ဖက်ကင်မ်ဂေါ်ဒွန်အပေါ်လိမ်လည်ခြင်းရှိနေသော်လည်း) တစ်ခု avowed အမျိုးသမီးအဖြစ်, Sonic လူငယ်ရဲ့ Thurston Moore ကအစွမ်းထက်မိန်းမတို့အားမိမိအတစ်ကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက်ကျိန်။ "Patti Smith ကသင်္ချာ Scratch" ဟုပန့်ခ် poetess များအတွက်လေးစားအတူ bristles, နှင့် "Ono Soul" ဟုအဆိုပါသဲအနုပညာရှင်ရိုသေ ယို Ono ဂစ်တာတုံ့ပြန်ချက်များနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်အသံနှင့်အတူ။ အကြားအမြင်ရနှလုံးလူငယ်-ful ဆောင်များတွင် Lee က Ranaldo နှင့်ဗုံယဉ်ကျေး Sonic အရေခွံလူကိုစတိဗ် Shelley ကနေအင်ဂျင်နီယာနှင့်တကွ, အလားတူ-မြည် SY အယ်လ်ဘမ်စမ်းသပ်ဂျက်သတ်မှတ်မည်, အမှိုက်ပုံးထဲသို့နှင့်အဘယ်သူမျှမစတားလိုက်ကြ၏။
တိအမ်းစထရောင်း - "တစ်ဦးကကဗျာဆရာရဲ့ဘဝက"
သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ Bradley Nowell ဟာတစုံတခုကိုမွငျနထေိုငျခဲ့ဖူးပါလျှင်သူတစ်ဦးကကဗျာဆရာရဲ့ဘဝကကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့အယ်လ်ဘမ်ထွက်ထားကြပြီပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Aggrolites ဖြင့်၎င်း၏ကိရိယာမှကျေးဇူးတင်ပါသည်တိအမ်းစထရောင်းရဲ့ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော် outing ထူရက်ဂေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအ rasp တီးဝိုင်းရဲ့တံပိုးမှတဆင့် snips နှင့်ဗုံ jangling, ထို့နောက်၏ dancehall skank သို့သူ့ဟာသူ flings "လှုပ်ရှားမှုထဲသို့။ " ကဗျာ၏ဤသုတ်မစိုက် Rancid နှင့်အစားထိုးကုသမှုတို့နှင့်မိမိပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ 90 rocker '' အားဖြင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်မဆိုထွက်စွန့်ခွာခဲ့သလား ကျွန်တော်တို့ကို 90srock@aboutguide.com အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်သိပါစေ!
သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်သီချင်းစာရင်းထဲသို့မကောင်းပါဘာသာတရားနှင့်အခြား rocker မသွားအောင်
ကို '90 ၏အကြီးမြတ်ဆုံးဒရမ်သမား
1990 ၏ထိပ်တန်း 10 ရော့ခ်သီချင်းများ
ကို '90 ၏ထိပ်တန်း 10 ရော့ခ်သီချင်းဆို
ကို '90 ၏ 10 အကြီးမြတ်ဆုံးရော့ခ်အဆိုတော်များ
ထိပ်တန်း 13 Weezer သီချင်းများ
ထိပ်တန်း 10 Courtney မတ်ေတာသသီချင်းများ
1995 ၏ထိပ်တန်း 10 သီချင်းများ
ခံရ.9အယ်လ်ဘန် '' (ထိုပုံပြင်ကဘာလဲ) နံနက်ဘုနျးတျောကို? '
လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုထောက်ပံ့သော functional သင်္ချာကျွမ်းကျင်မှု
အဆိုပါ Ganesha ဓမ်မတေးများအတွက်ဟိန်ဒီနှင့်အင်္ဂလိပ်သီချင်းစာသား (Aarti)
အခမဲ့ Delphi စိတျအပိုငျးသတ်မှတ်ပေးသည်
ဘယ်လို Slate စေရန်တစ်ဦးစာရင်းစစ်အတွက်
တစ်ဦးရွက်နွေတောင်ပေါ်မှာ Install လုပ်နည်း
Ellen Churchill ၏ Semple
Apollo ရဲ့ဇနီး, အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေး
Ulysses S ကို Grant ကရှိလောမြို့၌၏တိုက်ပွဲ
Hood ကိုကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
စပိန်မှာ "Unos" နှင့် "Unas" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို